Mulberry shizha Flavonoids
Nhepfenyuro ipfupi: Morus Alba, anozivikanwa semuchena mulberry, anorarama kwenguva pfupi, anokurumidza kukura, mudiki kusvika pakati nepakati saizi mulberry muti, mhando iyi inozvarwa kuchamhembe kweChina, uye inodyarwa zvakanyanya uye yakasarudzika kumwe kunhu. Bvisa yakabva pamashizha emuti wemurameri inogona kuburitsa hutano kana ikashandiswa semushonga. Mulberry Leaf inoonekwa seyakanaka miriwo muChina yekare yekurwisa-kuzvimba, kubatsira kurwisa zviratidzo zvekukwegura uye kuchengetedza hutano. Ipfuma muamino acids, vitamini C ...
Nhepfenyuro ipfupi: 1-Deoxynojirimycin, ichatumidzwa kunzi DNJ, ine simba-glucosidase inhibitors. Mushure mekudyiwa nemuviri wemunhu, inogona kumisa chiitiko cheinvertase, maltose enzyme, α-glucosidase uye α-amylase enzyme, inoderedza kunwa kwecarhydrate kugaya uye glucose, chengetedza hutano hweropa, uye basa rayo re hypoglycemic riri nani pane sulfonylureas, uye ayo mhedzisiro, senge hypoglycemia, yakanyanya kushoma pane mamwe madiro e hypoglycemic, iyo ...
Nhepfenyuro pfupi: 4-hydroxyisoleucine isiri-protein amino acid inowanikwa mufenugreek zvinomera, kunyanya mumbeu yefenugreek, ine simba rekusimudzira kubudiswa kwe insulin. Uye zvakare, 4-hydroxy-isoleucine inogona kusimudzira iyo creatine inopinda mumaseru maseru. Inogona kunatsiridza mhasuru simba uye kuonda tsandanyama, uye kusimudzira simba uye saizi yemhasuru maseru. 4-hydroxyisoleucine yakaratidzirwa nesainzi kuwedzera carbohydrate chengetedzo mumaseru maseru ichiderera ...
Pfupiso sumo: Furostanol saponins aripo muzvirimwa zve fenugreek saponin, inogona kuchengetedza testosterone ine hutano hwemuviri nekusimudzira muviri kuburitsa luteinizing mahormone uye dehydroepiandrosterone. Mhedzisiro yacho miviri inokonzerwa nemhedzisiro yayo yekusimudzira bvunzo. nhanho. Chidzidzo chazvino chinoratidza kuti zvikamu zvacho zvikuru, Furostanol saponins, yaimbove diosgenin saponin, inoita chinzvimbo chakasimba mu ...
Sumo pfupi . Iyo yakazara steroidal saponins, kunyanya ayo makuru steroidal sapogenin (diosgenin), ndiwo makuru anoshanda maitiro eFenugreek mhodzi yembeu. Iyo steroidal saponins iripo muFenu ...